Chii chako PROskore? | Martech Zone
Svondo, Zvita 18, 2011 Douglas Karr
Pane kufamba kwakawanda kuri kuitika izvozvi mu scging indasitiri. ndofunga Klout awana kushoropodzwa nguva pfupi yadarika… Zvakaoma kuve iye mukomana wekutanga pane block mune chero munda. Ndiri kutenda kuti mumwe munhu akatora basa rakaoma rekuvandudza yekutanga mvumo muindasitiri, zvakadaro, uye ndinovimba vanokwanisa kuchinjisa maalgorithms avo uye kuramba vachikudziridza.
Mumwe wevakwikwidzi wandinoona achikambaira zvakanaka ndiye PROskore. Algorithm yavo haisi yekungovakira pane yazvino maitiro (seKlout inoita kunge iri), yakavakirwa pamambure, ruzivo uye kubatana. Heino vhidhiyo inotsanangura PROskore:
PROskore inowedzera chimwe chinhu chakanaka… kugona kuenzanisa vanopa nevatengesi vezvigadzirwa nemasevhisi. Kana iwe uchitsvaga nyanzvi yeSEO, iyo sisitimu inogona kuwana iyo inomira zvakanaka uye iri munzvimbo iri padyo. Izvi zvakanaka… zvichikubvumidza iwe tsvaga zvinotungamira uye uteedzere mikana padyo, kana kutsvaga tarenda rakakukomberedza futi.
Pane kukanganisa mu "Professional Score" senge izvi, hazvo, uye ndizvozvo zvinorema zvakanyanya pakubatana kwemunhu. Kune zviuru zvemaPhD anoshanda kuseri kwezviitiko kumakambani akaita seGoogle, Apple neMicrosoft izvozvi izvo zviri kupenya, zviri kuchinja nyika mazuva ese, asi usazviise kunze uko munharaunda. Ini ndinotenda izvi zvibodzwa, sekune mamwe, zvinoramba zvichikwenya pamusoro pane kuchera zvakadzika.
Aya ma algorithms ekutsvaira mubayiro wevanowedzera uye kuranga ivo vanopinza. Chokwadi ndechekuti, isu hatigone kuve vanokakavara… uye makambani anoda zvese kana vachizobudirira. Nekudaro, kwenguva pfupi-pfupi, ini ndinofunga izvi zvibodzwa zvekunyorera zvakanaka kune avo vedu vanotsvaga kutaridzika. Ini ndaizoyambira mabhizinesi achivakisa kushambadzira kwavo kana kutsvaga mishandirapamwe pane chero eizvi zvikoro panguva ino kana vatengi vako kana vashandi vasiri vemaguruguru. Shandisa zvibodzwa uko zvine musoro!
Ini ndinonyatsoda PROskore, asi kushoropodza kwangu kwekupedzisira ndiko kwandinako neakawanda akarova algorithms. Zvakanaka kuti urikupa ruzivo kwandinenge ndiri… asi ruzivo harubatsiri kusvikira wandiudza zvekuita naro. Kana PROskore ikaraira vanhu kuti vawane kwakawanda kubatanidza, ruzivo rwakawanda, kana kupa chero mamwe makuru zvidimbu zvemazano, sisitimu yacho ingave nekuwedzera simba. Klout yaimbopa mhinduro ... asi handichioni panzvimbo yavo zvekare.
Izvo hazvina kukwana kuratidza vanhu marongero avakaita, vadzidzise maitiro ekuvandudza iwo!
Tags: simbakloutklout zvibodzwaproskorechibozwascgingkurovera algorithm
Steve Jobs: Tarisa, Chiono, Dhizaini
Zvita 28, 2011 na2:24 PM
Yakanaka post Douglas. Iwe wakafa pamusoro pekupa mubairo extroverts vs. introverts. Muchokwadi, ndicho chimwe chezvikonzero nei isu (PROskore) tichiwana vanhu zvichibva pane zvinopfuura pesvedzero yemagariro. Isu tinorangarira mamiriro edzidzo uye nhoroondo yebasa. Ndinotenda kuti ndisu chete puratifomu yekuita izvi…
Tichangotanga… Maita basa nenhau!
Zvita 28, 2011 na2:45 PM
Bill - tinotenda zvikuru nekumira nekuenderera mberi nebasa guru. Ndiri kutarisira kuona zvinotevera!